Qancinta Sariirta Lagu Qanciyo Darmanta Waa Udub Dhaxaadka Hanaanka Degan Ee Rearka.. | Gaaloos.com
Home » galmada » Qancinta Sariirta Lagu Qanciyo Darmanta Waa Udub Dhaxaadka Hanaanka Degan Ee Rearka..
Qancinta Sariirta Lagu Qanciyo Darmanta Waa Udub Dhaxaadka Hanaanka Degan Ee Rearka..
Marka ugu horeysa in natiijo fiican laga gaadho qolka sariirtra ayaa waxa muhiim ah in naagta…..Baasheynta dhunkashada iyo salaaxa ma aha in ay noqoto mid marka sariirta kor keeda oo kaliya la isku arko la sameeyo.
Laakiin waa in ay ahaato mid tusaale ahaa la sameeyo subaxdii marka la kala tagayo oo shaqo iyo arimo kale la aadayo. Taas oo xaasjaaga ku bilaabaysa in ay ayada oo dareen kuu qabta shaqadeeda aado.
Dareenka jirka dumarka.
Jirka haweenka waxa uu leeyahay meelo aad u dareen badan, laakiin nasiib daro lama ay soo dhalan haweenku buug ay ku qoran yihiin meelahaasi. Markaa waxa haboon in aad baadhitaan ku samaysid si aad u hesho meelaha xaaskaagu ka leedahay dareenka badan. Sida ay u muujiso dareen ayaad ka fahmaysaa in ay ku raaxaysanayso.
Markaas ayaa waxa aad ogaanasysaa in aad wado fiican cagta saartay. Qalabka aad adeegsanaysaana si aad u hesho meelahaa aad raadinayso ee dareenka badanina waa dibnahaaga, carabkaaga, farahaaga iyo gacmahaaga. Natiijaduna waxa ay noqonaysaa hooba hoo bay leedahay.
Title: Qancinta Sariirta Lagu Qanciyo Darmanta Waa Udub Dhaxaadka Hanaanka Degan Ee Rearka..